Maqaallada ku saabsan Bulgaria
Dalbo Visa Bulgaariya
November 12, 2020 Antika Kumari Bulgaria, fiisada
Fiisaha Bulgaariya waa ogolaansho la siiyo qof ajnabi ah si uu u soo galo, u joogo ama u sii maro garoonka diyaaradaha. Helitaanka waxaa lagu daabici doonaa qaab xabag ah oo lagu lifaaqay dukumeenti safar oo ajnabi ah ama beddelaad kale
Visa Bulgaariya ee Hindida
October 27, 2020 Antika Kumari Bulgaria, fiisada
Ma qorsheyneysay inaad booqato Bulgaria? Laakiin waxay ahayd mid jahwareer leh markii aad codsaneysay Visa Bulgaariya Visa. Hel dhammaan macluumaadka Visa Bulgaariya ee loo baahan yahay, yacni, Habka, u-qalmitaanka, iyo dukumintiyada looga baahan yahay Fiisaha Bulgaria. Kahor intaadan gelin Jamhuuriyadda Bulgaria,
Sida Loo Dalbado Magangalyo Bulgaariya
August 31, 2020 Antika Kumari Bulgaria, qaxootiga
Magangalyadu waa marka wadan kale magangalyo siiyo dadka dareemaya amaan daro wadankooda. Qof kasta oo ka socda waddan kasta wuxuu magan-galyo ka raadsan karaa Bulgaria markii uu dareemo khatar naftiisa ama noloshiisa ama nabadgelyadiisa. Codsi magangalyo, la gudbiyey